KENKAN WƆ Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bashkir Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kachin Khakass Kikamba Kikongo Kikuyu Kirghiz Kirundi Korean Korean Sign Language Krio Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Maya Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Vlax, Russia) Ronga Russian Samoan Sepedi Sepulana Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Spanish Spanish Sign Language Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tandroy Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Zapotec (Lachiguiri) Zulu
AKYINNYE biara nni ho sɛ woahu sɛ nyamesom kuw pii twe adwene si mpaebɔ fie ahorow so na wɔkyerɛ mmere pɔtee wɔ da no mu a ɛsɛ sɛ wɔbɔ mpae. So Bible no kyerɛ mmeae pɔtee ne mmere a ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae?
Ɛyɛ nokware, Bible no kyerɛ tebea horow a ɛfata a yebetumi abɔ mpae wom. Sɛ nhwɛso no, ansa na Yesu ne n’akyidifo no rebedidi no, ɔbɔɔ mpae daa Nyankopɔn ase. (Luka 22:17) Na sɛ n’asuafo no hyiam som a, wɔbom bɔ mpae. Enti wodii adeyɛ a na wɔakɔ so ayɛ no bere tenten wɔ Yudafo hyia adan mu ne Yerusalem asɔrefie hɔ no akyi. Ná nea Onyankopɔn pɛ ne sɛ asɔrefie no bɛyɛ “amanaman nyinaa mpaebɔ fie.”—Marko 11:17.
Sɛ Onyankopɔn asomfo hyiam na wɔbɔ mpae a, wɔn adesrɛ no tumi yɛ adwuma paa. Sɛ kuw no nyinaa adwene hyia, na mpae a wɔbɔ ma wɔn no ne Kyerɛwnsɛm mu nnyinasosɛm hyia a, Onyankopɔn ani sɔ. Mpaebɔ no betumi aka no ma wayɛ nea na ɔmmɔɔ ne tirim mpo sɛ ɔbɛyɛ. (Hebrifo 13:18, 19) Yehowa Adansefo bɔ mpae daa wɔ wɔn nhyiam ahorow ase. Wɔde anigye to nsa frɛ wo sɛ bra wɔn Ahenni Asa a ɛbɛn wo no so na w’ankasa betie mpaebɔ a ɛte saa.
Nanso, Bible no nkyerɛ beae anaa bere pɔtee a ɛsɛ sɛ wɔbɔ mpae. Wɔ Bible mu no, yehu sɛ Onyankopɔn asomfo bɔɔ mpae wɔ baabiara a wɔpɛ ne mmere ahorow mu. Yesu kae sɛ: “Sɛ worebɔ mpae a, kɔ wo pia mu na to wo pon mu bɔ w’Agya a ɔwɔ kokoam no mpae; ɛno na w’Agya a ɔhwɛ kokoam no betua wo ka.”—Mateo 6:6.
Yebetumi abɔ mpae bere biara, ne wɔ baabiara
So eyi nyɛ anigyesɛm? Wubetumi abɛn amansan Hene no bere biara mu wɔ kokoam, na nya awerɛhyem sɛ obetie wo. Enti ɛnyɛ nwonwa sɛ na Yesu nkutoo taa tew ne ho kɔbɔ mpae no! Bere bi a ɛda adi sɛ na ɔrehwehwɛ akwankyerɛ wɔ gyinaesi bi a ɛho hia ho no, ɔde anadwo mũ nyinaa bɔɔ Onyankopɔn mpae.—Luka 6:12, 13.
Mmarima ne mmea a wɔn ho asɛm wɔ Bible mu no bɔɔ mpae bere a wohyiaa nsɛnnennen anaa ɛho hiae sɛ wosisi gyinae a anibere wom no. Ɛtɔ mmere bi a wɔbɔ mpae denneennen, na ɛtɔ mmere bi nso a, wɔbɔ no wɔn tirim; wohyiam sɛ kuw a, wɔbɔ mpae, na na wɔbɔ mpae sɛ ankorankoro nso. Nea ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow ne sɛ, na wɔbɔ mpae. Onyankopɔn ka kyerɛ n’asomfo sɛ: “Munnnyae mpaebɔ da.” (1 Tesalonikafo 5:17) Ɔwɔ ɔpɛ sɛ obetie wɔn a wɔyɛ n’apɛde no daa. So eyi nyɛ anigyesɛm?
Nokwarem no, wɔ wiase a nkurɔfo gye biribiara ho kyim yi mu no, nnipa pii nhu mfaso a ɛwɔ mpaebɔ so. Ebia wubebisa sɛ, ‘So ɛbɛboa me ankasa?’
6 So Ebetumi Aboa Yɛn?
Share Share 5 So Bere ne Beae a Yɛbɔ Mpae Ho Hia?
w11 1/1 kr. 9